Poteto na akwụkwọ nri na shelves ụlọ ahịa. Omume nke Potato Union - Magazin "Usoro nduku"
в Ọkwa, News
Mgbụsị akwụkwọ abịawo, na poteto na akwụkwọ nri nke owuwe ihe ubi ọhụrụ a na -egosi ebe niile na shelves ụlọ ahịa. Kedu ụdị ngwaahịa a? Ndị ahịa ọ masịrị ya? Ọ nwere ike ịsị na ilele ya, ndị na -azụ ahịa ga -achọ esi nri efere nri ọtụtụ oge? Ka anyị tulee ka ihe si dị mma na mpaghara mba dị iche iche wee gbakwunye nnukwu foto.
Otu Potato Union na -ebido mmemme "Poteto na akwụkwọ nri na shelves". Zipu foto nke ngwaahịa "Ihe ihere na -eme gị" na nke "Ị nwere ike ịdị mpako", na -egosi aha ụlọ ahịa, adreesị, ụbọchị nleta, onye na -ebubata ngwaahịa na onye nrụpụta (ọ bụrụ na ị nyeghị nkwupụta, dee banyere ya. ọ). A ga -ebipụta foto nwere nkọwa na saịtị ahụ njikọ.
Anyị na -eche akwụkwọ ozi na adreesị: info@welikepotato.ru. A na -ekwe nkwa amaghị onye ọ bụla.
Anyị na -atụ anya nkwado nke ndị sonyere n'ahịa!
Tags: Otu ndukunduku mmaOwuwe ihe ubi nduku 2021